Mhoro shamwari, pane yedu saiti Sentensi chimiro muchiGerman Kune akawanda zvinyorwa zvine chekuita nezvidzidzo zvake. Shamwari dzedu zhinji dzinoda kuti isu tiise zvidzidzo zvedu pamisoro senge chimiro chechirevo cheGerman uye chivakwa cheGerman chirevo.
Pamusoro pechikumbiro chako, isu takanyora chimiro chedu chechiGerman uye zvivakwa zvemitsara kubva zero kusvika kumberi zvinotevera. Unogona kuverenga zvidzidzo zvedu pazasi kuti utange nechokutanga chinhu.
Paunotarisa zvidzidzo zvedu pazasi, iwe unozokwanisa kugadzira akasiyana maGerman mitsara iwe pachako nyore kwazvo.
Iwe unogona kuverenga chimiro cheGerman chirevo uye zvidzidzo zvekuvaka zvirevo zveGerman zvakateedzana. Tinovimba kuti iwe uchabatsirwa zvakanyanya kubva kumatopiki edu anotsanangurwa muTurkey zvakafanana.